Windows 10 ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းစွာ Reset လုပ်နည်း - နည်းပညာလမ်းညွှန်များ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဘယ်အချိန်မှာ device ကိုပြသရန်စတင်သည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ရောဂါလက္ခဏာများငါတို့မဖယ်ရှားခင်ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်းများကိုစစ်ဆေးပါ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာစသည်တို့သည် operating system မှစီမံခန့်ခွဲသောစက်ပစ္စည်းများကြုံတွေ့နေရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့မင်းကိုပြမယ် Windows 10 ကို scratch ကနေ reset လုပ်နည်းဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Windows 10 ကိုသန့်ရှင်းသောမိတ္တူတစ်ခုသာတပ်ဆင်ထားသည့်အလားကွန်ပျူတာကိုထားခဲ့ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာ၌ထည့်သွင်းထားသောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းရန်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာလည်းဖြစ်သည်။
1 Windows 10 ကိုမစတင်မီစိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည့်အချက်များ
1.2 မည်သည့် application များကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ
1.3 Windows settings ကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ပါသည်
2 Windows 10 အား Reset လုပ်ရန်အဆင့်များ
Windows 10 ကိုမစတင်မီစိတ်စွဲမှတ်ထားသင့်သည့်အချက်များ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Windows သည်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပေါ်တွင်ရှိသည့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုမိတ္တူကူးရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ backup တခုမလုပ်သင့်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဤဖြစ်စဉ်သည်ဘယ်သောအခါမျှပျက်ကွက်မည်ဖြစ်သော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပျက်ကွက်သောလူများ၏ ၁% ကိုသင်အမြဲတမ်းထိတွေ့နိုင်သည်။
Windows 10 တွင် backup တစ်ခုပြုလုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်များကိုကူးယူပါ ကျွန်တော်တို့၏မိတ္တူ 10 ကိုပြန်ယူပြီးသောအခါ၎င်းကိုပြန်ယူရန်။
သင့်တွင်ဖိုင်တည်ဆောက်ပုံမပါရှိသေးပါ၊ နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြန့်ထားသောဖိုင်များရှိပါကသင်လုပ်နိုင်သည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုလ်ဒါများအားလုံးကို My Documents ဖိုင်တွဲထဲကူးထည့်ပါ ထို့အပြင်အရန်ကူးကော်ပီတစ်ခုကိုပြင်ပ drive တစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ ဒီသင်ခန်းစာ.
မည်သည့် application များကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမလုပ်ဆောင်မီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာများကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည် ငါတို့ install လုပ်ထားသော applications များနှင့်စာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ ပြီးတော့ငါတို့ပုံမှန်သုံးတယ် ပြန်လည်မထည့်သွင်းမီတပ်ဆင်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုတော့သော application များအားလုံးကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သော application များသည်ကျွန်ုပ်သည် Microsoft Store မှ ၀ ယ်ယူ / ဝယ်ယူလျှင်၊ ငါတို့ရှာစရာမလိုဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်အကောင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ချက်များတွင်သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နံပါတ်။ မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော applications များစာရင်းနှင့်အတူ၊ serial နံပါတ်ကို application မှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူရပြီး၎င်းသည်အချိန်ဖြုန်းခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
သင်ပုံမှန်အသုံးပြုသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအကြားသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်နောက်အသွင်အပြင်တစ်ခုမှာ - သင် Office, macros, Photoshop brushes သို့မဟုတ် plugins, browser extensions များမှ download လုပ်နိုင်သောတင်းပလိတ်များ သင့်ကွန်ပျူတာ၌ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပြားတွင်မပါ ၀ င်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်တစ်ခုရှိပါကသင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသော configuration တန်ဖိုးများကိုသင်သိမ်းဆည်းထားပါကပြင်ပဖိုင်သို့သိမ်းဆည်းခြင်း (သို့) တင်ပို့ခြင်းဖြင့်သတိထားသင့်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ option ကိုကမ်းလှမ်း။
Windows settings ကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်ပါသည်
၀ င်းဒိုးကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောဤရွေးချယ်မှု၏ဆိုးကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာထိုအရာတွင်တွေ့နိုင်သည် configuration ကိုသိမ်းဆည်းမပေးပါ ငါတို့အသင်းထူထောင်တယ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများပျက်ယွင်းနေရသည့်အကြောင်းရင်းမှာယာဉ်မောင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၊ ဘလူးတုဆက်သွယ်မှု၏ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
Windows 10 အား Reset လုပ်ရန်အဆင့်များ
ပြီးခဲ့သည့်အခန်းများ၌သင်ပြခဲ့သောကဏ္ all အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသည်နှင့် Windows 10 ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုစတင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမှာက access ကို Windows configuration options Windows key + shortcut ကနေတဆင့်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်စရာများကိုရယူနိုင်သည် Update နှင့်လုံခြုံရေး။ ဤအပိုင်းအတွင်း၊ ဘယ်ဘက်ကော်လံရှိ၊ ကိုနှိပ်ပါ နာလန်ထူ.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ညာဘက်ကော်လံသို့သွားပြီး Reset this PC section တွင် button ကိုနှိပ်ပါ စတင်.
နောက်၊ နှစ်ခုပြန်လည်ထူထောင်ရေး options များ Windows 10 ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်။
ငါ့ဖိုင်တွေသိမ်းထားဖြေ - settings နဲ့ applications တွေကိုပယ်ဖျက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွေကိုသိမ်းထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များအားလုံးကိုမိတ္တူကူးထားသော်လည်းပထမရွေးစရာကိုရွေးချယ်တော့မည်။ ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်များကိုသိမ်းထားပါဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောစာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ။
သင်၏ကွန်ပျူတာ၏သဲလွန်စကိုဖယ်ရှားလိုပါက၊ install လုပ်ထားသော applications များနှင့် configuration options နှင့် files နှစ်ခုလုံးကိုဖယ်ထုတ်ချင်လျှင်၊ Windows 10 ကို scratch ကနေ install လုပ်လိုက်သလိုမျိုးပဲဒုတိယရွေးစရာကိုရွေးရမည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည့်ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။
ပုံသေတန်ဖိုးများကိုပြန်လည်ထားရှိရန် Configuration Options ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
မည်သည့်အပလီကေးရှင်းများအားဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိုပါကဖယ်ရှားရန်အတွက်လျှောက်လွှာစာရင်းကိုနှိပ်ပါ။ သင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုပါကဤစာရင်းတွင် ၀ င်းဒိုးစတိုးမှကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည့်အပလီကေးရှင်းများကိုမပြပါကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာများမဟုတ်ပါက၎င်းတို့ကိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှကူးယူပြီးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။
သတိရပါဖြေ - ကျွန်တော်အကြံပြုထားတဲ့ဒီစာရင်းကိုမရေးဘူးဆိုရင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီသင့်ကိုစာတိုက်ကနေတဆင့်ပို့ပေးတဲ့ပုံကိုသင်ရိုက်ကူးနိုင်တယ်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ကိုနှိပ်ပါ ပြန်လည်စတင်။ ပြန်လှည့်ခြင်းမရှိသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအနက်တစ်ခုကိုကျော်သွားလျှင်သင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်သင်ပြန်သွားသင့်သည်ကိုသတိရပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ လျှောက်လွှာအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ အချိန်နည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ပြီးကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်တို့ကမသုံးနိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတာနဲ့ Windows start မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒီမှာငါတို့အကောင့်အတွက်စကားဝှက်ကိုရေးရတော့မယ်။
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, ငါတို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် ငါတို့ install လုပ်ထားသော applications များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှဖယ်ရှားလိုက်ပြီ နှင့်၎င်းကိုအသစ်စက်စက်အဖြစ်ပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Windows 10 ကို install လုပ်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းထားသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များအားလုံးရရှိနိုင်ခြင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Windows 10 ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းစွာ reset လုပ်နည်း
CD Audio ကို MP3 သို့ပြောင်းပါ - PC အတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ